पर्यटकको रोजाइमा सिस्नुका परिकार – Karnali Pati
पर्यटकको रोजाइमा सिस्नुका परिकार
कालिकोट: कर्णाली सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालक पुत्रबहादुर मल्ल सुरुका दिनमा अलमलमा थिए, पर्यटकलाई के खुवाउने ? सहर–बजारबाट आएका पर्यटकले गाउँका परिकार रुचाउलान् भन्नेमा ढुक्क थिएनन् ।
तैपनि, उनले खाँडाचक्र नगरपालिका–७ पिलीमा कर्णाली सामुदायिक होमस्टे सुरु गरेदेखि नै स्थानीय परिकार बनाउन थाले । सिस्नुको तरकारी, पकौडा, कोदोको रोटी, ढिँडो, मकैको रोटी, रातो चामलको भात । ‘पर्यटकले त सिस्नु मन पराए, सिस्नुको परिकार नखाने कोही हुँदैनन्,’ मल्लले भने ।
उनले सिस्नुको साग र तकारी बनाउँछन् । खाजा लागि सिस्नुको पकौडा पाक्छन् । चियासँगै पकौडा खाने कमै हुने गरेको उनले बताए । ‘पर्यटकको पहिलो रोजाइ नै सिस्नु हुन्छ । कतिपयले खाइसकेपछि घरका लागि भनेर सिस्नुको पिठो पनि लग्छन्,’ उनले भने ।
कर्णाली होमस्टेमा सिस्नुसँगै स्थानीय उत्पादनका परिकार नै पाक्छन् । कोदो र मकैको रोटी पनि धेरैले खाने गरेका छन् । त्यसपछि मात्रै भात पर्यटकको रोजाइमा पर्छ । त्यसमा पनि रातो चामलको भात खाने गरेको उनले बताए । ‘गाउँको वातावरणमा खानामा पनि गाउँकै स्वाद हुन्छ । सहर–बजारका होटलमा जस्तो मरमसला नभएको, खानाकै स्वाद पाइन्छ,’ मल्लले भने ।
पर्यटकलाई बसोबास, खानपिनबाट सन्तुष्ट बनाइरहेका मल्ललाई इन्टरनेटको कमीले केही अभाव भएजस्तो लाग्छ । प्रायः सबै बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकले इन्टरनेट खोज्ने गरेको उनले बताए । ‘इन्टरनेट छ ? भनेर सोध्छन् । छैन भन्नु परेको छ,’ उनले भने । मोबाइलसमेत राम्ररी नलाग्ने पिलीमा इन्टरनेट नहुँदा पयर्यटक धेरै दिन नबस्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘इन्टरनेट भए पर्यटक केही दिन बस्थे, अहिले एक–दुई दिनमै निस्किहाल्छन्,’ उनले भने ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस १७, २०७५ 11:34:47 AM